Fiainana andavanandro :: Miandrandra ny faharetan’ny “Tsena mora “ ny mponina • AoRaha
Fiainana andavanandro Miandrandra ny faharetan’ny “Tsena mora “ ny mponina
Andrandrain’ny mpanjifa eny amin’ny fokontany ny hitohizan’ny “Tsena mora” hivarotana menaka fahandro, siramamy ary vary. Nambaran’izy ireo fa : « manala fahasahiranana ny fividianana an’ireo kojakoja sy vary ireo amin’ny vidiny mirary ».
“Misy elanelana be ny vidin’ireo entana ireo sy ny eny amin’ny mpivarotra hafa. Jifaina arivo ariary ny iray kilao amin’ny vary, roa arivo ny an’ny siramamy ary telo arivo ariary ny iray tavoahangy amin’ny menaka aty amin’ny tsena mora. Ahazoana tombony kokoa mihoatra ny mividy eny an-tsena nefa samy ilaina amin’ny andavanandro ireo”, hoy Raharivololona Nathalie, renim-pianakaviana monina eny Andraharo, tonga nividy entana tao amin’ny “Tsena mora” Ankazomanga, omaly.
Afaka mividy entana eny amin’ny “ Tsena mora” avokoa ny olona rehetra manana karinem-pokontany, araka ny fanazavana voaray. “ Tsy voafetra ny karazan’olona mian­tsena ety an-toerana fa tsy maintsy mitondra an’io karine io kosa anefa ho fanamarinana . Azo atao ihany koa ny miverina indroa raha efa nahazo avokoa ny olona eo alohany”, hoy kosa i Marcelline, lehiben’ny faritra fahefatra ao amin’io fokontany io. Nambaran’ny mpivarotra enta-madinika an-tsinjarany teny amin’ny manodidina kosa fa: “ tsy misy
fiantraikany amin’ny tsena ny fisian’ireo entana amidy mora ireo. Tonga mividy vary hatrany ireo mpanjifa tsy nahazo ny anjarany tany amin’ny Tsena mora”, hoy ny mpivarotra iray. Araka ny fantatra, indroa isan-kerinandro no handalovan’ny “Tsena mora” eny amin’ny boriborintany iray. Miovaova kosa ny toerana hahafahan’ny mponina manjifa an’izany. Anisan’ ny samy nandray “Tsena mora”, ohatra ny teny Ankazomanga sy ny fokontany Ambohimanarina, omaly. Nanamafy kosa Raherimanana Charlie, mpandrindra ny tsena fa: “ voatana ny fisian’ny Tsena mora. Hoezahina haparitaka any amin’ny distrika hafa sy ny faritany ihany koa izy io”, hoy izy.
Famokaran-drano etsy Amoronankona